Madaxweyne Biixi markuu SNM ku biiray ninkii waalidka biixi jabuuti geeyay si aan kacaanku u dhibaatayn, maanta muxuu madaxweynuhu ugu abaalguday.W/Q:-Cabdi Cabdilaahi. |
Madaxweyne Biixi markuu SNM ku biiray ninkii waalidka biixi jabuuti geeyay si aan kacaanku u dhibaatayn, maanta muxuu madaxweynuhu ugu abaalguday.W/Q:-Cabdi Cabdilaahi.
Hargeisa(GNN):-Mujahid Mohamed ahmed ismail oo ku magac dheer CEERIGAABO waa dhibane u xidhan madaxweynaha somaliland Muse Biihi Abdi .
Mujahid cerigabo wuxu ka mid ahaa ururkii SNM waxay dhaawacyo badan kasoo gaadheen dagaaladii wadanka lagu xoreeyay dhaawacyadaas oo sababay inuu naaffo noqdo.
Mujahid cerigabo waxa dhul siiyay maayar Jiciir, dhulkaas oo ahaa baloodh ku yaala galbeedka magaalada hargeisa.
Wuxuuna mujaahidku ka dhistay guri sadex qol ka kooban oo suuligii iyo kijadiina dheertahay, waxana ku noolaa mujahidka waalidkii iyo caruurtiisa.
Dhulkii maayar jiciir siiyay mujaahid ceerigaabo waxaa sheegtay oo dacwad furtay qoyska madaxweyne Biixi oo ku dacwoonaya lahaanshaha dhulkan uu ku yaalo guriga cerigabo, iyadoo sifo sharciya uu mayar jiciir ku siiyay mujahid cerigabo. .
Waxana uu cerigabo haystaa sharcigii dhulkaas oo dhamaystiran, waxa wax lala yaabo ah inuu madaxweyne biixi ciidan soo dhoobay agagaarka gurigii ay ku noolaayeen qoyska cerrigaabo.
Gurigii mujahid cerigaabo waxay qoyska madaxweyne biixi kusoo wareejiyeen dayr.
Waxa ciidankii ay sifo sharci darro ah ku xidheen mujahid cerigabo, iyadoo ayna ciidanku waaran u haysan aqalka cerigabo ayay gudaha usoo galeen oo ay waliba ku jidh dileen gudaha aqalkiisa, waxana la horkeenay maxkamada , waxana lagu xukumay sanad iyo bil xadhig ah si aanu mujahidku xadhiga u iibsan.
Waxay ciidankii goor habeenimo ah yimaadeen aqalkii mujahid ceerigaabo waxayna dibada uga soo saareen dhaman qoyskii ceerigaabo oo ay ka mid ahaayeen aabihii iyo hooyadii oo waayeel ah iyo caruurtiiba, waxay ciidanku jidh dil u gaysteen waalidkii iyo caruurtii oo ay qorriga dabadiisa la dhaceen, waxana dhacdadaas ii xaqiijiyay xaaska mujahid cerigabo, iina sheegtay in xataa askartu ka xishoon waayeen mujahidka waalidkiisa oo ay dhaawacyo soo gaadhsiiyeen.
Waxa wax laga xumaado ah oo arxan darro ah in caruur, hooyadood, awoowgood, iyo ayeeydoodba ciidanku saq dhexe gurigoodii kasoo saaraan,
Qoyskii waxay habeenkii u hoydeen jaarka.
Waxayna aroornimadii ku waabariisteen alaabtii aqalka oo dhamaanteed dibada taala oo sidii qashinka loo soo daadiyay,
Muwadin waxad is waydiisaa gurigaagii iyo dhulkaagii oo inta lagaa qaado habeenimo lagaa soo saaro walibana la dumiyo alaabtaadiina dibada lagu soo daadiyo waa dareen nooceeya ? Jawaabta shacabkaan u daayay.
dhacdooyinkan waxay la midyihiin oo ay waliba ka xunyihiin arxandarooyinkii dawladii siyad barre samayn jirtay.
Waxa la dumiyay gurigii mujahid cerigabo oo gabi ahaantiiba dhulka lala simay,
Waxana qoyskii madaxweyne biixi usheegeen qoyskii mujahid cerigabo in dhul lagu qiyaaso nus baloodh ay ugu badaleen dhulkoodii ugana dhiseen sandaqad laba maqsin ah .
Cadaalad darro ka weyn ma jirto arinta qoyskan ku dhacday sababtoo ah gurigii ssadex qol ee jaahuurka ahaa looma dhisin ee waxa loo dhisay sandaqadaas labada maqsin ah .
Sidoo kale nus baloodhna way ka qaadeen.
Imisa dhacdo oo bahalnimo ah ayaa reerkaas loo gaystay oo waliba lagu jeesjeesay lagana dhigay qoys dulmi wadayaal ah.
Waxan baaq dheer udirayaa madaxweyne biixi waxanan ugu baaqayaa inuu hoos u eego qoyskaas dulmanaha ah ee waliba ay dulmiyeen qoyskiisa uu ka midyahay. dulmiga qoyskaas loo gaystay maaha dulmi qoraal lagu soo koobi karrayo balse waxan qalinka u qaatay damiirkayga ayaa waajibkiisa gudanaya, waxayna awoodaydu noqoto kaliya inaan soo bandhigo dhibka iyo tacadiga qoyskaas ku dhacay, sidoo kale waxan axsaabta mucaaridka cod dheer ugu sheegayaa inay cadaalad daradaa iyo tacadigaa ka hadlaan qoyskaasna garab Istaagaan.
Mujahid cerigabo wuxu ku xidhnaa saldhiga dhexe ee Hargeisa imika waxa loo qaaday mandheera waxa lagu xidhay qol ciqaabeed dhib weyn ugaystay mujahidka, waxa ciqaabtaas loo marinayaa dhawaan markii muwadin saldhiga dhexe lagusoo xidhay ay saldhiga dhexdiisa isku waraysteen , oo markii muwadinkii lasoo daayay uusoo bandhigay dhibaatada iyo cadaalad darada uu ku xidhanyahay mujahid cerigabo.
Ugu danbayntii mujahidka dhibka intaa leeg ay qoyska madaxweyne biixi ugaysteen, waxay taariikhdu xustay oo shacabka somalilandna ogyihiin in markii madaxweyne biixi SNM ku biiray uu mujaahid cerigabo waalidka dhalay madaxweyne biixi ukexeeyay jabuuti si aan kacaankii dhib ugu gaysan.
waxan shacabka reer somaliland ugu baaqayaa inay qoyskaas soo booqdaan oo ay dhibka la qaybsadaan.
Halkan Guji Ka Daawo Sida Loo Dumiyey Gurigiisa.
Tixraac: waxan booqday qoyskan dhiban
Author: Abdi Abdilahi Ismail
Email : kahin018@gmail.com